जुम बैठक कसरी प्रयोग गर्ने एक टाढाको ट्र्याकमा तपाईंको पोडकास्टमा एक रिमोट गेस्ट रेकर्ड गर्न Martech Zone
म तपाईंलाई ती सबै उपकरणहरू भन्न सक्दिन जुन मैले विगतमा पोडकास्ट अन्तर्वार्ताहरू रेकर्ड गर्न प्रयोग गरें वा सदस्यता लिएको छु - र ती सबै समस्याहरू थिए। यसले मेरो कनेक्टिविटी कत्ति राम्रो छ वा हार्डवेयरको गुणस्तरको फरक पर्दैन ... बीच-बीचमा जडान सम्बन्धी मुद्दाहरू र अडियो क्वालिटीले मलाई सधैं पोडकास्ट टस बनाउँदछ।
मैले प्रयोग गरेको अन्तिम सभ्य उपकरण स्काइप थियो, तर एप्लिकेसनको प्रयोग व्यापक थिएन त्यसैले मेरो पाहुनाहरूलाई प्राय: स्काइपको लागि डाउनलोड गर्ने र साइन अप गर्ने चुनौतीहरू थिए। थप रूपमा, समयमा मैले खरीद गरेको प्रयोग गर्नुपर्‍यो add-on Skype को लागि ट्र्याक रेकर्ड गर्न र निर्यात गर्न.
जूम: सही पोडकास्ट कम्पियन
मेरो एक सहकर्मीले मलाई सोधेको थियो कि मैले कसरी अर्को दिन टाढाको पाहुनाहरू रेकर्ड गरें र मैले उसलाई प्रयोग गरेको थाहा दिएँ जूमबैठक बैठक सफ्टवेयर। ऊ उडाियो जब मैले उसलाई बताएँ किन ... जुमको विकल्पले तपाईंलाई प्रत्येक आगन्तुकलाई उनीहरूको आफ्नै अडियो ट्र्याकको रूपमा निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ। बस जानुहोस् सेटिंग्स> रेकर्डि। र तपाईं विकल्प पाउनुहुनेछ:
जब म एक अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्छु, म सँधै स्थानीय कम्प्युटरमा अडियो बचत गर्दछु। एक पटक अन्तर्वार्ता पूरा भएपछि, जुमले स्थानीय रेकर्डिंग डाइरेक्टरीमा अडियो निर्यात गर्दछ। जब तपाईं गन्तव्य फोल्डर खोल्नुहुन्छ, तपाईंले प्रत्येक ट्र्याक एक फोल्डरमा पाउनुहुनेछ जुन राम्रो नाम राखिन्छ र त्यसपछि प्रत्येक सहभागीको ट्र्याक समावेश हुन्छ:
यसले मलाई गार्जेन्डमा प्रत्येक अडियो ट्र्याकहरू छिटो आयात गर्न सक्षम गर्दछ, मलाई चाहिएको ट्र्याकबाट खोकी वा गल्तीहरू हटाउनको लागि आवश्यक सम्पादनहरू गर्दछ, मेरो परिचयहरू र आउट्रोहरू थप गर्दछ, र मेरो पोडकास्ट होस्टको लागि निर्यात गर्दछ।
म पनि एक पोडकास्टको समयमा तपाईंको भिडियो फिड राख्न अत्यधिक सिफारिश गर्दछु! जब म मेरो पाहुनासँग कुरा गर्दैछु, म विश्वास गर्दछु कि हामीले एक अर्काबाट लिने भिडियो संकेतले कुराकानीमा व्यक्तित्वको एक टन थप गर्दछ। थप रूपमा, यदि म कहिले कुनै दिन मेरो पोडकास्टहरूको भिडियो ट्र्याकहरू प्रकाशित गर्न चाहान्छु, मसँग भिडियोहरू पनि थिए!
अहिलेको लागि, मेरो पोडकास्ट कायम राख्न पर्याप्त काम छ, यद्यपि!
टैग: अडियो ट्र्याकहरूनिर्यात अडियो ट्र्याकहरूपोडकास्टपोडकास्टिङअलग ट्र्याकहरूजुमजूम रेकर्डि।